Yemagariro Media Gwara rezveMari Vashandi | Martech Zone
Yemagariro Midhiya Gwaro reVashandi veMari
Chitatu, October 16, 2013 Muvhuro, October 14, 2013 Douglas Karr
Marty Thompson iri kugara ichitsvaga inonakidza zvemukati kana zvasvika kune bhizinesi rezvemagariro. Kana kambani yako iri kutsvaga kubvunza kwehunyanzvi mukuvandudza kwako kushamwaridzana, ini handizive wezve ari nani chipangamazano muindasitiri. Mune ino infographic, iyo nhungamiro inoendeswa kune vezvemari. Nguva zhinji, masangano emari anonzwa sekunge maoko avo akasungwa nekuda kwemitemo yekuteerera kutevedzera - hazvisizvo chaizvo. Vashandi vezvemari avo vese vari kushandisa vezvenhau zvine hungwaru uye vane maitiro uye mapuratifomu ekuramba vachiteerera vari kuita zvinonakidza.
Zvinoenderana neazvino Advisor Touchpoints kudzidza kubva Cogent Tsvagiridzo, 87% yevanopa mazano mubhizinesi kwemakore mashanu kana mashoma vari kushandisa vezvenhau (kuwedzera kwakakura kubva muna2012), nepo 35% chete yeavo vanga vachidzidzira kweanopfuura makore makumi maviri vari kuita zvemagariro. Kunyangwe iwe parizvino uchisanganisira vezvenhau mukuita kwako, kushanda pachirongwa, kana kumirira chinguva chidiki, pane zvimwe zvakatarwa uye zvausingafanirwe kufunga.
Tags: chipangamazano zvibodzwacogent kutsvagisaindasitiri yezvemarikuronga zvemarinyanzvi dzemarievanhu vezvenhausocial media gwara
Mahara Ebook: Teerera Kumusoro! Zvemagariro Kuteerera KweSmart Business
Musungo: Akangwara, Zvoga Zvemukati Curation